नेतृ रामकुमारी झाँक्री पक्राउ, के भन्छिन् उनी?( हे’र्नुहोस् लाइभ भिडियो) – Sadhaiko Khabar
नेतृ रामकुमारी झाँक्री पक्राउ, के भन्छिन् उनी?( हे’र्नुहोस् लाइभ भिडियो)
प्रकाशित मिति: बिहिबार, माघ २९, २०७७ समय: १४:०६:४१
काठमाडौँ/ नेकपा दाहाल-नेपाल समूहकी अध्यक्ष रामकुमारी झाँक्रीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको अन्त्यको बेला आएको बताएकी छन्।
आफूलाई पक्राउ गर्न शंखमुलस्थित घरमै अपराध महाशाखाको टोली आइपुगेपछि उनले पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीविरुद्ध फेरि कडा टिप्पणी गरिन् ।
उनले भनिन्, ‘तपाईंहरुलाई थाहै छ नि ! राष्ट्रपतिको भूमिकाप्रति कोही पनि सन्तुष्ट छैनन्। कानुनले नगर्नु भनेका बाहेक सबै काम गर्नुभएको छ उहाँले । हामी गणतान्त्रिक व्यवस्थाको पक्षमा छौँ । राजतन्त्रकालिन भद्दा अभ्यास गर्न लाग्दा मैले बोलेकी हुँ, बोलिरहन्छु।’
उनले भनिन्, ‘गणतन्त्रका प्रतीकले राजतन्त्रकालीन अभ्यास गरे । त्यसैको परिणाम हो अहिलेको घटना । युरोप अमेरिकाका राष्ट्रप्रमुखहरुको पनि त्यो खालको वैभव छैन। प्रधानमन्त्रीको एसिस्टेन्ट या मतियारका रुपमा राष्ट्रपतिले भूमिका खेलिन्। त्यही भएर विरोधमा उत्रिनुपरेको हो।’
झाँक्रीले ओली र भण्डारीको प्वाँख पलाएको बताइन्। ‘तानाशाहहरु ढल्नेबेला यस्तै हुन्छ, प्वाँख पलाउँछ यो त्यही भएको हो’, उनले थपिन्, ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिगमन गर्नुभयो । त्यसको मतियार राष्ट्रपति हुनुभयो भनेर त हामी सडकमा लडिरहेका छौँ नि, मैले बोलेको कुरा सानो कुरा हो । यसलाई ठूलो मुद्दा बनाइयो।’
आफ्नो घर बाहिर प्रहरी आउँदा यो व्यवस्था नै खोसिएको जस्तो लागेको झाँक्रीले बताइन्।